Volana tsy mandalo fa mitoetra… | NewsMada
Ao anatin’ny iray volana ho an’ny teny malagasy izao. Toy ny isan-taona. Mby aiza? Tsy hita loatra izay tena fihatsaran’ny fandalana sy ny fikajiana ary ny fiarovana ny tenindrazana na tenin-dreny. Ndeha hanaratsy tena amin’izany ve? Iaraha-mizaka izay mitranga sy iainana isan’andro. Ahoana, ohatra, ny fanajana ny teny amin’ny fandefasana hafatra amin’ny finday, ny tranonkalam-pifandraisana…?
Eny, na amin’ny teny mita sy amin’ny kabarim-panjakana aza, firifiry, ohatra, ny miteny hoe “afaka atao”, “afaka tenenina”… ? Nefa ny marina: “azo atao”, “azo tenenina”… Tsy fahalalana ny fahadisoana? Na tsy fisian’ny fanitsiana, na tsy firaharahana, na fahazaran-dratsy… Maro ny azo tanisaina, hatreto (milaza toerana). Mbola fahadisoana koa izay: maro ny azo tanisaina hatramin’izao (milaza fotoana)…
Saingy, toa ireharehan’ny sasany, sanatria, ny fahadisoana na ny tsy fahaizana teny malagasy? Na tsy manahirana, tsy mahamenatra, toa fahamboniana aza. Raha teny vahiny no diso tsy nahy, aoka fotsiny… Misy koa manamarin-tena na mialokaloka amin’ny hoe tsy mazava izay tian-kolazaina, raha teny malagasy no ampiasaina. Dia vao mainka tsy ho azo mandrakariva ny teny malagasy rehefa tsy ampiasaina.
Miaina ny teny: velona, mitombo, simba, mety ho faty… Arakaraka ny fampiasana azy izay: tandremana sy kajina amin’ny fifandraisana amin’ny teny hafa tsy atao rapa-dango, tsy arovana fahatany koa ka itokana-monina ka lasa mahantra am-pitoerana… Mihazakazaka ny fiainan’izao tontolo izao amin’ny lafiny sy ny sehatra samihafa amin’ny hoe fandrosoana, mila maharaka sy mifanaraka amin’izany ny teny.
Amin’izao iray volana izao ve no mba itenenana sy ahatsiarovan-tena ny maha zava-dehibe ny volana na ny teny? Nefa ny volana na ny taona, mandalo fa ny volana na ny teny, mitoetra: miantoka ny aina sy ny fanahin’ny firenena amin’ny famolavoana ny maha olona, miantoka ny fifandraisan’ny samy olona… Avela mandalo fotsiny àry ve izao volana anomezan-danja ny volana izao? Mila anaovana dingana…